त्रिशुली अस्पतालमा मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका शैक्षिक कार्यक्रम पढाइ हुने - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ बाग्मती प्रदेश ∕ त्रिशुली अस्पतालमा मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका शैक्षिक कार्यक्रम पढाइ हुने
त्रिशुली अस्पतालमा मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका शैक्षिक कार्यक्रम पढाइ हुने
हेल्थ आवाज मंगलबार, २०७८ साउन १२ गते, ११:४५ मा प्रकाशित
काठमाडौं-नुवाकोटको त्रिशुली अस्पतालमा हेटौडामा रहेको मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका शैक्षिक कार्यक्रम पढाइ हुने भएका छन् । सोमबार अस्पतालको ५७ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा प्रतिष्ठानका शिक्षाध्यक्ष डा. सतिशकुमार देव र अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. दिपेन्द्र पाण्डेले शैक्षिक कार्यक्रम अध्यापन सम्बन्धि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
प्रतिष्ठानअन्तर्गतका चिकित्सा, डेन्टल र नर्सिङका विभिन्न विषयगत शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनमा हुनेछन् । प्रतिष्ठानले भदौंदेखि नर्सिङ र चिकित्सकका विषयगत कक्षा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी अगाडि बढाएको छ ।
१ सय ३० शैय्याको त्रिशुली अस्पताल भौतिक पूर्वाधार र शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको लागि उपयुक्त रहेकोले शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि छनोट गरिएको हो । २०७६ असोज २ मा बागमती प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान हेटौंडाले गत असारदेखि शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गरेको हो ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले प्रतिष्ठानलाई ब्याचलर अफ पब्लिक हेल्थ, ब्याचलर अफ फार्मेसी र ब्याचलर अफ साइन्स इन मेडिकल ल्याब्रोटरी टेक्नोलोजी विषयमा अध्यापन गराउन अनुमति दिइसकेको छ । शैक्षिक कार्यक्रम मात्र नभई स्वास्थ्य सम्बन्धि अनुसन्धान तथा जनरल प्रकाशनसमेत संयुक्तरुपमा गरिने डा. देवले बताए ।
त्रिशुली अस्पतालका मेसु डा. दिपेन्द्र पाण्डेले चिकित्सा, डेन्टल र नर्सिङलगायतका विषयको अध्यापन त्रिशुली अस्पतालमा हुने सहमति भएको बताए । ‘हामीले प्रतिष्ठानका विद्यार्थीहरुलाई यहाँ पढाउने छौं,’ उनले भने । डा. पाण्डे मेसु बनेर गएपछि पछिल्लो समय त्रिशुली अस्पतालमा व्यापक सुधारका कामहरु भएका छन् ।